M/weynaha Hiiraan State Eng Mohamud Abdi Gaab oo soo gabo gabeeyey safarkii uu maalamahiku marayey wadamo bariga dhexe ka tirsan malintii shaleyto aheyd.
Posted by admin on September 21 2011 13:56:16
HS:-M/weynaha Hiiraan State Eng Mohamud Abdi Gaab oo soo gabo gabeeyey safarkii uu maalamahani ku marayey wadamo bariga dhexe ka tirsan malintii shaleyto aheyd, kedib markii uu boogasahdiisii ugu danbeysay ku soo gabo gabeeyey dalkaasi Kuwait isagoona dhamaanba ku guuleystay safaradiisii oo u badnaa sidii loo gar gaari lahaa shacbaka Hiiraan ee ay abaaruhu heleen.
HS:-M/weynaha Hiiraan State Eng Mohamud Abdi Gaab oo soo gabo gabeeyey safarkii uu maalamahani ku marayey wadamo bariga dhexe ka tirsan maalintii shaleyto aheyd, kedib markii uu booqashadiisii ugu danbeysay ku soo gabo gabeeyey dalkaasi Kuwait isagoona dhamaanba ku guuleystay safaradiisii oo u badnaa sidii loo gar gaari lahaa shacabka Hiiraan ee ay abaaruhu heleen.
M/weynaha HS iyo wafigiisa oo siweyn loogu soo dhaweeyey mudadii uu ku sugnaa wadamadani ayaa dhinaca kalena lagu wadaa in uu gar gaar ay ugu deeqeen hay'yaddo ka howl kala wadamadaaasi lagu wadaa in la gaarsiiyo shacabka Hiiraan iyadoo loo marayo wado kasta oo dadkaasi dhiban lagu gaarsiin karo gar gaarkaasi oo ay aad ugu baahan yahiin.
M/weynaha ayaa lagu wadaa inuu ku sii hakan doono dalka isku taga imaaraadka Carabta kedibna uga sii gudbi doono Somaliya. dhawaantan ayaa lagu wadaa in la magacaabo gudi arimaha gar gaarka kala shaqeeya hayaddahii uu madaxweynaha iyo waftigiisa u soo bandhigeen baahida abaareed ee ka jirta Hiiraan si gar gaarka la siinayo dadkaasi ay u noqoto mid joogto ah iyadoo howsha loo xilsaari doono gudi uu dhawaan magacaabi doono madaxweynaha oo isku xira hay'ddaha iyo shacabka Hiiraan ee ay heysato dhibaato nololeed kii ugu xumaa oo dhinac kasta leh.
Mar aanu la xariirnay m/weynaha HS ayuu inoo xaqiijiyey in isaga iyo waftigiisa mudadii ay joogeen amaba safarka ku marayeen ujeedadooda ugu weyn aheyd sidii loo gar gaari lahaa shacabka Hiiraan taasi oo uu rajo weyn ka muujiyay in sida ugu dhaqsiyahay badan dadkaasi loo gaarsiin doono macaawinada ay u baahan yahiin iyadoo ay hada abaarta ka jirta koofurta Somaliya ay mareyso heerkii ugu xumaa mudo 60 sano ah lagana yaabo hadii aan gar gaar deg deg ah lala gaarin shacabka Hiiran ay noqdaan kuwa ugu badan oo ay dhibaatadu soo gaari doonto.
Dowlad goboleedka HS ayaa waayadanba waday dadaalo iskugu jiray wacyi galin sidii ay bulsahda reer Hiiran u heli lahaayeen dowlad goboleed adag oo looga danbeeyo siyaasada Hiiraan iyo waliba sidii ay reer Hiiran u noqon lahaayeen umad jirta oo isku tashada waxuuna madaxweynahu sheegay inuu soo dhaweynayo dadaalo kasta oo lagu mideynayo maskaxda, siyaasada iyo waliba dhaqaalaha reer Hiiraan.
Sidoo kale shacabka Hiiran ayuu ku booriyey iney u diyaar garoobaan sidii ay u hormarin lahaayeen degaanada ay dalka ka degan yahiin una diyaar garoobaan sidii ay maamulkiisa ula shaqeyn lahaayeen si ay meesha iyaguna ugu baneeyaan siyaasiyiinta reer Hiiraan ee dooneysa iney mustaqbalka hogaamiyaan shacabka Hiiraan, isagoo qiray in maamulka HS lagu gaari karo maamul weyn oo bulshada Hiiran u horseedi kara mustaqbal iftiin badan.
Waxuuna madaxweynaha mar kale ku celiyey in aduunyadu gar gaar la gaarto umada ku dhiban Hiiran iyo inta badan dalka Somaliya.